Top Top XNUMX Miisaan Laydhka Apps | Androidsis
Ahaanshaha qaab aad muhiim ugu ah badankood.. Naga telefoonka android waxay noqon kartaa caawimaad weyn oo arrintan la xiriirta. Maalmo ka hor ayaan ka hadalnay barnaamijyada lagu isticmaalo qolka jimicsiga. Laakiin, waxaa jira siyaabo kale oo loo daryeelo nafteena adoo adeegsanaya qalabkeena Android. Waxaan sidoo kale culeyska ka qaadi karnaa si fudud codsiyada.
Haddii aad tahay isticmaale doonaya inuu qaabeeyo ama aad ku fikirayso inaad cunto bilowdo, liistadani waa hubaal inay adiga dan kuu tahay. Waxaan hoosta kaaga tageynaa a xulashada barnaamijyada miisaanka luminta ugu fiican. Diyaar ma u tahay inaad wax ka barato barnaamijyadan?
Waxaan hoos kaaga tagaynaa adiga dhammaan liisaska codsiyada laga heli karo Android kaas oo miisaanka lagu dhimayo waa hawl aad u fudud. Kaliya waxaan ubaahanahay taleefankeena Android oo runtii waxaan rabnaa.
2 Kaloriska miisaanka - MyFitnessunes
5 Kaloori Counter Pro - MyNetDiary
Waa macquul mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee la yaqaan isticmaalayaasha badankood. Thanks to codsigan waad la socon kartaa dhaqdhaqaaqa aad qabato maalin kasta. Waxay kaa caawin doontaa waxqabadkaaga markaad jimicsato. Laakiin sidoo kale la soco kalooriyada aad gubtay. Marka waxaad leedahay raad-raac sax ah markasta. Waxa kale oo ay leedahay naqshad weyn oo ka dhigaysa mid aad u fudud in la isticmaalo.
La app download waa lacag la'aan. Intaas waxaa sii dheer ma heli karno wax iibsi ama xayeysiis gudaha ah.
Developer: Hal qayb oo ka mid ah Fitbit, Inc.
Kaloriska miisaanka - MyFitnessunes
Ikhtiyaar kale oo caan ah oo caan ah waxqabadkiisa wanaagsan. Xaaladdan oo kale waxaan leenahay a xakameyn karo kalooriyada aan cunno maalin kasta. Miyuu keydkiisu leeyahay 6 milyan oo saxan iyo raashin ah. Marka, ka sokow ogaanshaha kalooriyada ay leeyihiin, waxaan dooran karnaa kuwa sida ugu habboon noogu habboon. Intaa waxaa dheer, waxaan leenahay ikhtiyaarka ah iskaan baar si loo xaqiijiyo xogta nafaqada ee shey kasta. Waxaan sidoo kale haynaa talooyin kala duwan.
La app download waa lacag la'aan. Laakiin, waxaan la kulannaa xayeysiis, oo aan ka saari karno innagoo bixinayna qaddar.
MyFitnessPal: cuntooyinka maalin kasta
Developer: MyFitnesspto, Inc.
Waa ikhtiyaar kale oo weyn oo u muuqda mid ka mid ah miisaanka kalooriyada ugu fiican in aan heli karno. Waxay na siisaa macluumaadka nafaqada on tiro badan oo suxuunta kala duwan. Sidaa darteed, waxaan u abuuri karnaa menu sida aan u jecel nahay ama hadba baahidayada. Intaa waxaa dheer, waxay xambaarsantahay a xakameyn karo kalooriyada aan cunno maalin kasta. Marka waan sii wadi karnaa dabagal buuxa.
La soo degsashada codsigan si aad miisaan u lumiso waa bilaash. Intaas waxaa sii dheer, kuma laha wax xayeysiis ah ama wax iibsi gudaha ah. Ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo la tixgeliyo.
FatSecret Kalorie Counter
Developer: Sirta Fat
Magaca arjiga hore wuxuu uga tagay fikrad wanaagsan oo ku saabsan sida ay u shaqeyso. Waa codsi ah Faa'iido weyn oo miisaan lumis ah. Sidoo kale waa mid ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran ee aan heli karno. La soco kalooriyada aad isticmaasho maalin kasta. Sidaa darteed, marka lagu daro ogaanshaha waad la socon kartaa markasta. Marka shaqadeedu waa mid aad u cad.
La soo degsashada codsigan si aad miisaan u lumiso waa bilaash. In kasta oo, sida kuwa kale oo badan, aan wax uga iibsanno gudaha.
Waayi! Calories counter
Kaloori Counter Pro - MyNetDiary
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan marka aan go’aansaneyno inaan lumino miisaanka waa cunto. Waa inaan helno cunto nagu habboon. Ha ahaato mid caafimaad leh oo naga caawi hadafkeenna. Sidaa darteed, codsigani waa ikhtiyaar aad u faa'iido badan. Waxay leedahay xog-ururin aad u dhameystiran oo leh raashin badan iyo cunno ku habboon in lagu dhimo miisaanka. Cunnooyinka cuntadu waxay ku gaar yihiin arjiga, laakiin isticmaalayaashu sidoo kale way soo gudbin karaan wax iyaga u gaar ah.
Sidoo kale, waan la socon karnaa miisaanka iyo kalooriyada la isticmaalo maalin kasta. Ku soo degsashada arjiga on Android waa lacag la'aan. In kasta oo aan wax ka iibsanno gudaha.
Kalorie Counter - MyNetDiary
Tani waa annaga xulashada leh codsiyada ugu fiican ee miisaanka lumiya. Kaliya ku soo dejiso qalabkaaga Android oo ku bilow hadafyadaada hadda. Thanks to codsiyadaan way fududaan doontaa fulinta howshan iyo la soco markasta horumarkaaga. Miyaad isticmaashay mid ka mid ah barnaamijyadan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Barnaamijyada ugu fiican ee miisaanka lumiyo